Kudu - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
I-Kudu okanye i-Greater Kudu [Tragelaphus strepsiceros]
Jonga i-kudu endle.Kudu ubonise ukunyaniseka kwezesondo ezinamandla kwiinkunzi zeenkomo zithwala izimpondo ezinkulu, ezide, ezijikelezayo ezifikelela kwiirekhodi ezifikelela kwi-1.8 m. Iiphondo zikhula zize ziphele ubude babo kwiminyaka emithandathu. Iibhokhwe nazo zifumana ubukhulu obukhulu kunokuba zizinkomo.
Iibhokhwe zinokulinganisela ubuninzi malunga ne-300 Kg kunye nobude beeplanga eliphakathi kwe-1.4m kunye neenkomo zilinganisela u-Kg 210 ngephakamileyo lomda we-1.25m. I-brown-brown inengubo ebomvu-emhlophe, ephawulwe ngemigca emhlophe emagqabini ahlukeneyo ngobukhulu, ubukhulu kunye nomzekelo. Ibhande elibunjiweyo ebunzini nasemacaleni amhlophe kwizitama. Amaninzi ezinwele ezinde zihamba ukusuka emveni kwentloko emva komsila, kunye nentamo engezantsi ukuya esiswini.
Njengoko umkhangeli wesibhakabhaka, iintlobo zezilwanyana zondla kwiindidi ezahlukeneyo zemithi kunye ne-shrub. Ama-succulents anjenge Spekboom kunye nama-Aloes nawo adliwe.
Ukuvota kwe-kudu.UseMzantsi Afrika ixesha lokukhusela liza ngo-Ephreli ukuya kuMeyi. Ukuzalwa kwangaphandle kwexesha akuqhelekanga.
Kwiinyanga ezine zokuqala ukuya kweyesithandathu, amathole alala efihliweyo kwaye atyelelwa nguomama ngonesi. Ienkomo kunye namaqela abo asekuhlaleni amaqela ezentlalo ezine ukuya kweshumi.
Izilwanyana ezingaphezu kwama-20 zihlala zihlukana zibe ngamaqela amancinci. Ienkomo ezincinci zihlala kunye neyunithi yomama, kodwa iinkomo ezincinci zenza amaqela athile xa sele ekhula ngokwesondo, ngokuqhelekileyo kwiminyaka emibini.
Iibhokhwe zihlangene neenkomo zezilwanyana ngexesha lokuqhathaniswa, kodwa zithanda ezinye iindawo zokuhlala ngaphandle kwexesha lokukhula. Akukho nendawo yokuhlala phakathi kweenkomo, kodwa zibonisa ubudala kwaye ngenxa yoko ubukhulu becala bobuqili.
I-kudu ehlathini. I-Kudu ikhetha isiqithi esinamahlathi, iintaba zamatye ezintaba zeentaba, iziqithi ezivulekileyo zeN Knobthorn kwiSizwe saseKruger kunye neefama zezemidlalo eMpumalanga, kwiindawo zehlathi zaseMopane naseMiombo eziMantla aseMntla nakumaNtla-ntshona kunye namazwe angaphezulu.
I-Kudu isasazwa ngokubanzi eMzantsi Afrika, isilwanyana esiqhelekileyo sezilwanyana zemidlalo, iifama zezemidlalo ezizimeleyo kwaye zihlala zihlangene kwiifama ezininzi.
Igama lesiLatini: Tragelaphus Strepsiceros
Ubunzima (Owesifa): 200 kg
Ubunzima (Owesilisa): 250 kg
Ixesha lokuGestation: 7,5 iinyanga
Akunabantwana abaselula: 1 ithole
Isisindo sokuzalwa: 16 kg
I-Horn: 125 cm
Incinci enye izalwe naliphi na ixesha phakathi nonyaka kunye nenqanaba eliphezulu ngasehlotyeni emva kwexesha lesiganeko malunga neenyanga ezi-7.
Ixesha elide kwaye libhekise phambili kuneNyala, efana nobude kwiBlue Wildebeest, kodwa kungekhona njengokuba ichithwe. 8 - 9 cm ubude.